आज २०७७ भदौ १२ गते शुक्रबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस – Rapti Khabar
आज २०७७ भदौ १२ गते शुक्रबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुस
आज २०७७ भदौ १२ गते शुक्रबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ ।
सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
मन भावुक र उत्ताउलो बन्नेछ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुनेछ । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर छ । सरकारी निकाएको भयपनि रहला ।
पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । विपरित वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ ।
शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । आदर्श ब्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । पढाइमा प्रगति हुनेछ ।
लाभ,हानी,आय,व्यय,सुख,दुख वरावरी खालको समय छ । धार्मिक कार्यमा रुचि रहनुका साथै सामाजिक पदप्रतिष्ठा प्राप्त हुने देखिन्छ ।
शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । प्रेम जीवन सुखद् रहने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा सफलता पाईनेछ । महिला वर्गबाट विषेश सहयोग मिल्नेछ ।
आज आत्मबलमा कमी आउनेछ । मनमा चिन्ता र दुविधा उत्पन्न हुनेछ । प्रेमीको सहयोग पाईनेछ । स्वास्थ प्रति सचेत रहनु होला ।
नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धार्मिक कृत्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । नयाँ कार्य वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ ।
आज रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । जोश,जाँगर र उमङ्ग बढ्नेछ । वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ ।
एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । राजनैतिक र कूटनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर निर्णय कार्यान्वयन हुन संघर्ष गर्नु पर्ला ।
मिष्ठान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ ।
आज अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । धर्म,कर्ममा मन लाग्नेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ ।
आज नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । परिवारको साथ सहयोग मिल्नुका साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् । – ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल
अब काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा के हुन्छ ? ३ जिल्लाका सिडियोको यस्तो छ तयारी
१६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ १७ गते सकिने निषेधाज्ञालाई फेरि निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् । उपत्यकामा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण निरन्तर बढिरहेकाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने प्रशासन कार्यालयहरुको तयारी छ । तर, यो पटक अत्यावश्यकसँगै थप केही क्षेत्रलाई खुकुलो पारिनेछ । त्यसको […]
करियर राशिफल: वृष राशीलाई फाइदैफाइदा, कुनकुन राशी छन् लक्कि ? हेर्नुस
Posted on October 10, 2020 Author Rapti Khabar
वृष राशी करियर राशिफलअनुसार यस पटक वृष राशीका ब्यक्तिलाई मालामाल हुने देखिएको छ । यी राशीका ब्यक्तिले आजका दिन लिने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ भने तुला राशीका ब्यक्तिका लागी भने कार्यक्षेत्रमा निराशा भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । अन्य कुन कुन राशीको आज करियर राशिफल कस्तो छ त ? मेष राशी बिजनेसमा पार्टनरबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ […]
प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारलाई फोन गरेपछि…
पुटिनको यो घोषणाले बढ्यो हलचल, अब के होला ?